Yussuf Poulsen Oo Sheegay In Rb Leipzig Ku Riyoodaan Ku Guuleysiga Horyaalka Chermany.
Home Horyaalka Germalka Yussuf Poulsen oo sheegay in Rb Leipzig ku Riyoodaan ku guuleysiga Horyaalka...
Yussuf Poulsen ayaa sheegay in RB Leipzig ay ku riyoonayaan inay ku guuleystaan horyaalnimada Bundesliga ka dib guushii 3-2 ee ay ka gaareen kooxda Borussia Monchengladbach.
Monchengladbach ayaa hogaaminayay 2-0 ka dib 20 daqiiqo oo sabtidii ah, laakiin Leipzig ayaa dib ula dagaalantay seddex gool oo qeybtii labaad ah – oo uu ku jiro gool ay dhaliyeen daqiiqadii 93aad oo uu dhaliyey Alexander Sorloth.
Markii ugu horeysay taariikhdooda Bundesliga, Leipzig ayaa badisay kulan ka dib markii looga hormaray laba gool Natiijadan ayaa ka dhigeysa Leipzig inay labo dhibcood ka dambeyso hogaamiyaasha Bayern Munich ka dib markii kooxda difaacaneysa ay 5-1 ku garaacday Cologne Sabtidii.
Leipzig, oo ku dhameysatay kaalinta seddexaad labadii olole ee ugu dambeysay Bundesliga isla markaana kaalinta labaad ka galay 2016-17, ayaa haatan badiyay shan kulan oo isku xigta si ay cadaadis weyn ugu saaraan Bayern.
Poulsen, oo joogay Leipzig ilaa 2013 ayaa yidhi: Qof walba wuxuu ku riyoodaa cinwaanka, gaar ahaan markii aad joogtay meesha ugu sareysa Bundesliga Dabcan qof walba wuu ka fakarayaa laakiin waxaan ognahay inay weli jirto seddex meelood meel xilli ciyaareedkii.
Tartanka horyaalka ee Leipzig ayaa maray heer sare, iyadoo Bayern ay dhibco ka heshay kulamadii isku xigta ka dib markii ay ka soo laabteen ololaheedii koobka kooxaha adduunka ee Qatar.
Si kastaba ha noqotee, Julian Nagelsmann’s Leipzig ayaa hoos u dhigaya foostada guuldarada taas oo si weyn u curyaamin lahayd himilooyinka cinwaankaas.
Poulsen wuxuu ka mid ahaa gooldhaliyayaashii qeybtii labaad iyadoo Leipzig uu u weecday, iyadoo bedelkii nus-saac Sorloth uu wax weyn ku soo kordhiyay.
Poulsen ayaa yidhi: \_”Waxaan soo bandhignay qaab ciyaareed aad u sareeya waxaanan u qalanay inaan badino.
Ciyaar sidan oo kale ah ka dib, kalsoonida ayaa sarreysa oo gu’ga tallaabadaada.
Previous articleMark Lawrenson oo shaaca ka qaaday saadaashiisa Chelsea FC v Man United
Next articleTababaraha Liverpool Jurgen Klopp oo hadlay tagitaanka Kooxda ee Mohamed Salah